Isiphepho sibhidlize isiteshi sikaphethiloli | Scrolla Izindaba
Isiphepho sibhidlize isiteshi sikaphethiloli
Imimoya yesiphepho ihlasele e-Vereeniging, eningizimu neGoli ngoLwesihlanu, yadala ukuthi kubhidlike nesiteshi sikaphethiloli.
Kusabalale ezinkundleni zokuxhumana amavidiyo akhombisa ibhasi netekisi ebibhajwe ngaphansi kwe-carport yase-Global Petrol Station.
Izimvula ezinamandla, ukuduma kwezulu nomoya kubikiwe ezingxenyeni eziningi zezwe kusukela ekuqaleni kukaLwezi.
EThekwini, uMasipala weTheku wethule uhlelo lokuqapha isimo sezulu olusekelwe kwi-inthanethi olusebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukuthola isimo sezulu esibi.
Uhlelo Lwesixwayiso Sokuqala Esibikezelayo futhi lwaziwa ngokuthi yi-Coastal-Live.
Ngesikhathi kwethulwa lolu hlelo, iMeya uMxolisi Kaunda uthe lolu hlelo lokusebenza yisinyathelo sokuqala sokwenza ulwazi nezixwayiso zesimo sezulu esibi kakhulu ukuthi kutholwe abahlali.
“Sekwenzeke izehlakalo eziyikhulu zezikhukhula eThekwini kusukela ngowezi-2017,” kusho iMeya.
Uhlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Coastal-Live olusebenzisa izilinganiso zemvula ne-radar ezindaweni ezigcina amanzi ukuqapha imvula namanzi olwandle, olokuqala ukwethulwa ngumasipala eAfrika.